Leganya Beach Ihhotela 3 *: incazelo Ihhotela, ukubuyekezwa
Njengoba wathenga uhambo ukuze Leganya Beach ke Ihhotela 3 *, izivakashi kukukhipha ngoba umnotho ukuphumula ku bone kahle noLwandle LwaseMedithera. A izinsuku eziyisikhombisa ukuvakasha intengo umuntu ngamunye ingu- $ 379. Ihhotela itholakala resort of Alanya esifundeni, ngesikhathi resort yayo ukonga kakhulu Mahmutlar, efanelekayo imikhaya. Lesi sakhiwo amamitha 300 nje ukusuka olwandle.
I izincwajana ephelelwe yisikhathi usengayibona igama endala eziyinkimbinkimbi Ihhotela: Leganya Beach Ex Mari Beach. Ukuze ugweme ukudideka, siphawula ukuthi, naphezu igama elehlukile, lokho kukunye nokuthi ihhotela efanayo. Suka sezindiza complex hhotela imizuzu 35. Endleleni, ubona bacishe bayifunda yonke Mahmutlar. Phela, wayehawukela, eqinisweni - yakha ngemgwaco, kanye ezimbili noma ezintathu perpendicular nalokho ezitaladini.
Nokho, izivakashi e Alanya otovaritsya izithelo ezisanda kukhiwa, ushizi, amaswidi zaseMpumalanga - akuyona inkinga. kane ngeliviki kukhona emakethe lapho uthenga imikhiqizo njalo aqukethe Leganya Beach.
Ngokwe-umkhuba esungulwe, izivakashi bahlale egumbini ngokushesha lapho usufika kuleyo ndawo.
Ihhotela anakho isakhiwo 6 storey. Leganya Beach Ihhotela 3 * - ihhotela elincane nge ingqikithi amakamelo 30. On endaweni yayo kuyinto engadini netimphawu ichibi compact ongaphandle. Ababemzungezile ongakasetshenzwa Sun Terrace: ilanga loungers nezambulela izibuko. Okuphuzwayo uhlezi endaweni pool ukuthenga kubha ehhotela.
Zonke amakamelo ehhotela-Igumbi ezimbili, ivulekile, ngenhloso emangalisayo kolwandle. Inkonde ngayinye ifakwe umshini kuvulandi nge itafula nezihlalo ezimbili.
Ifenisha emakamelweni akuyona entsha, kodwa serviceable: ikhabethe, eliseceleni kombhede amatafula, embhedeni, itafula, izihlalo. Amagumbi at Leganya Beach Ihhotela 3 * selikhanyise air conditioning, i-TV, minibar, umshini wokomisa izinwele futhi kukhona elekrochaynik. Indlu yangasese kuyinto ukhululekile, elineshawa futhi yangasese. Amagumbi bahlanza nsuku zonke, futhi ushintsho amathawula kanye amashidi - Njalo ngemva kosuku olulodwa. Amakamelo ukunikela-Wi-Fi.
Abasebenzi hotel banobungane izicelo izivakashi abathola isahlulelo ngokushesha.
Ihhotela encane yakhelwe izivakashi nezidingongqangi. amakhasimende lakhe - ngenkuthalo impilo-resort, bona ahlele emaholide akho. Noma kunjalo, ihhotela ne echazayo, ungathenga uhambo, inkonzo amakhadi, lapha kukhona izingubo, izingubo ayina kungenziwa yayala.
Leisure uhambo - ihhashi izivakashi kakhulu Leganya Beach Ihhotela. Izibuyekezo lezivakashi kukhona enele imininingwane yalolu eziyinkimbinkimbi Ihhotela: ukonga imali, iningi uzuza uhambo ezisemadolobheni travel ejensi.
Futhi ehhotela ungakwazi ukuqasha ibhayisikili ukuhlola Mahmutlar. Kunezinto ezimbalwa amathebula for ithenisi.
Ngaphezu kwalokho, sokuqasha omunye izimoto 9 zingahlelwa edilini lomshado ehhotela.
Ngqo okuphambene ihhotela sihamba endleleni lapho epaki ibhasi. I yafuna umzila ehhotela izivakashi: Mahmutlar - Alanya.
Iningi ezintathu-star hotel izivakashi Leganya Ibhishi (Turkey) ulisebenzise njengendlela yesikhulumi ukuhlola ubuhle resort of Alanya.
Ihhotela lolwandle incane. It is Kufakwe nendawo enhle, eduze emadwaleni, embozwe Pines, imisedari, oki, nezomjunipha. Ibhishi e ngokwanele ifakwe ilanga loungers kanye baphathe nezambulela. Sea phansi lapha enamadwala. Ngakho-ke efiselekayo ukuba baphathe izicathulo for ukubhukuda.
Nokho, olwandle uqobo in the beach Amanzi njengabawufanelekele amazwana ezithophayo kakhulu: oluluhlaza, crystal ecacile. Nqamula kuwo - nemnandi.
Nokho, izivakashi ukuthatha izimoto eziqashisayo, nethuba ukuvakashela engcono emabhishi Antalya. Ngokusho ukubuyekezwa, emangalisayo ukhululekile lolwandle iholide ngamanzi ezikhangayo isiqinisekiso Lara Beach, ikakhulukazi izivakashi ozithandayo Russian; Olympos - ebhishi, sizungezwe zikaphayini emahlathini, ethokomele kakhulu esekusithekeni lolwandle Adalar.
Catering izivakashi idlulisa main ehhotela yokudlela Leganya Beach Ihhotela 3 *. Ungadliwa abantu abangu cuisine European futhi lendawo. Nokuningi - lendawo. Phela, ihhotela nhlobo izivakashi kuyi-Nguqulo Yezwe naseNtshonalanga Yurophu. Kuyinto ikakhulukazi ukuphumula Russian futhi Turkish. Yokudlela yehhotela abaqhuba uhlobo amandla "isigamu-ibhodi". Ngesikhathi sokudla kwasemini ehhotela Inekamela ehlukile. Ukuze uthole imali, ungacela oweta ukuletha ukudla nje endlini. Le sevisi - ikhokhwe.
Futhi ngaleso eziyinkimbinkimbi ehhotela has a bar.
Izimpendulo ezivela izivakashi, ihhotela yokudlela onesizotha futhi kubeka izingxenye inyama kanye nenhlanzi. Kodwa eziningi nemifino izitsha, ehla. esihlwabusayo kakhulu ikhofi wendawo.
izivakashi Active ihhotela Leganya Ibhishi (Turkey), ibhulakufesi, noma uhambo, noma uthwale noma yiluphi yezitolo. Ukuze ukuthengwa kwezimpahla kwezinhloso zenzuzo, izivakashi eziningi ukuya maphakathi Alanya, emgwaqeni Ataturk. It ewela ngu ezitaladini eminingi ezitolo lesikhumba, ubucwebe, isikhumbuzo.
Labo wanquma ukuthenga i-athikili eziyigugu, ukubuyekezwa izivakashi ehhotela, kunengqondo ukuvakashela Boutique Baran Club Jewellery kanye nokugcina Sifalar Jewellery. ububanzi wabo umxhwele. Njengoba isitolo ngaphezu kwanoma yimuphi omunye lesikhumba uye izivakashi Baran Club, kanye "isikhumba e Alanya Umhlaba", lapho amanani yelinyenti.
Nokho, kungukuthi kulungiswe, kute umthengi kufanele ukuceka intengo ezamenyezelwa umdayisi, a eyamukelekayo kakhulu futhi ibonakala ingokoqobo. Ngokwesibonelo, ukuthenga ijazana lasebusuku, kufanele ugxile intengo 10 $, imifanekiso eyenziwe-onikisi - $ 7-8, abesifazane lesikhumba jacket - $ 300, Fall zabesilisa - $ 488; zabesifazane amajazi kid - $ 550.
Qaphela ukuthi abahwebi savvy kufuthwe amanani izikhathi 2-2.5.
Izivakashi abangakwazi adayiswa, bakhetha ukuthenga ukudla ezitolo nge amanani fixed. Zokudla "Alanium" futhi "Metro" - kwekulu wabo.
Labo abafisa ukunambitha ebusuku club impilo Antalya izivakashi abancane perky ukuncoma Antalya Club "Mothnam" kanye club "Shida". Akubizi, ungakwazi uphumule "Club 29". Fans of disco kushintshane kanzima oludakayo ukusetshenziswa uthanda Club Dedeman.
Eduze kwendawo lapho ihhotela elise Leganya Beach Ihhotela, kuyinto engabizi ukuvakasha edeskini. Izivakashi the resort kuzinsizo zawo, ikakhulukazi hhayi uyakuhlupha iziqondiso abathengisela at emba eqolo intengo Kuzonyuka.
Kakhulu ziphoqa izinkambo:
- enqabeni Red Tower (Kizil Kule, ematheni lokusinda inqaba emhlabeni Seljuk) lasendulo;
- iziphethu ezishisayo of Pamukkale (lapha ungathatha cwilisa in the yemvelo amaminerali pool, yaqanjwa Cleopatra, okuyinto igeziwe amaRoma yizicukuthwane ngesikhathi);
- eKhaphadosiya (esiyingqayizivele ngempucuko yasendulo project - idolobha ezibaziweyo edwaleni);
- uhambo Demre - World - Kekova (umuntu izivakashi babe nethuba lokuvakashela shrine Christian - esontweni imithetho yesevisi Nikolay Chudotvorets, kanye emanxiweni izakhiwo Lycia lasendulo);
- kuya Dalmatash emhumeni (sivale indlela engena emgedeni grand ehlotshiswe elilengayo kumnandi futhi stalagmites).
Ngokuvamile, into isithakazelo zinikelwa yimikhaya leli hhotela compact kuyiso sonke Alanya. Leganya Beach Ihhotela linikeza izivakashi zayo kungenzeka ukupaka izimoto aqashiwe. Imisebenzi nokusetshenziswa imoto - iholide enhle ehhotela umnotho.
Ngokuvamile, ngokubona izivakashi, eyinkimbinkimbi ehhotela akusho ukuhlinzeka amasevisi eliphezulu ezintathu-star iholide.
Ekupheleni kwalesi sihloko Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi izinga ukuphumula, ikakhulukazi emahhotela amancane, ngezindlela eziningi incike friendly yakho abasebenzi, iqinisekisa ukuhlala kwakho. Yiba nobungane, smile! Funda imisho ethile Turkish, futhi uhambo lwakho ngeke uhambe endaweni enobungane. Turkish yethu "sawubona" lihunyushwa ngokuthi merhaba; "Usale kahle" - hoshchakal; "Ngiyabonga" - saola. Barmen ehhotela - fun guys nobudlelwano. Uma uku at the bar, ujabulela iziphuzo, ngezinye izikhathi aho: Şerefe ( "Emhlanganweni" - okuvame kakhulu ubhontshisi Turkish), liyoba le esikhethekile sale isikhungo.
Mirage Suite Hotel 3 *. Turkey amahhotela "5 izinkanyezi" - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Amahhotela Phuket eziphezulu (3 izinkanyezi, umugqa 1): incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Recipe. Kupaty ku - Georgian
I-Amazing Cobblestone Lobelia
Indlela yenqubo yokugaya imikhiqizo metal
I "Mill" - close inganekwane kuwe!
Capital-labour isilinganiso. ukubala ifomula. Ukuhlaziya Inkomba amagugu
Amathikithi Grand Theatre ukuthenga